K/Galbeed oo Furaysa Wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > K/Galbeed oo Furaysa Wadada isku xirta Muqdisho iyo Baydhabo
January 15, 2018 Cali Yare417
Ciidamo ka tirsan militirga Soomaaliya iyo kuwa MIdowga Afrika ayaa waxaa ay howlgalo ka dhan ah Dagaalamayasha Al-Shabaab waxaa ay ka wadaan Degaano iyo Degmooyin ka tirsan oo ay ka arimiyaan maamulka koofur galbeed Soomaaliya.
Degaanada ay howlgalo ka Sameeynayaan Ciidamada Xooga ayaa waxaa ka mid ah degaanka jameeco oo 30 KM u jirta Degmada Buurhakabada ee gobalka bay iyo Degaano kale.
Wasiir ku xigeynka amaanka Koofur Galbeed C.risaaq Cabdi Aadan ayaa waxaa uu Sheegay in ay Wadaan Qorsho la isugu furayo Wadada isku xirta baydhabo iyo Muqdisho,uu sheegay in Dhibaato badan ay ka jirto.
Sidoo kale waxaa uu tilmaamay in Dhawaan ay Ciidamada ay gaari doonaan Degaanka Leego ee gobalka Shabeelaha hoose,islamrkaana waxaa uu xusay in Shabaab ay ka Saari doonaan guud ahaan degaanada koofur galbeed Soomaaliya.
Gobalada Bay,Bakool iyo Shabeelaha Hoose ayaa waxaa hada ka Soconaya Howlgal ka dhan dagaalamnayaasha Al-Shabaab,kaasi oo ay wadaan Ciidamada Xoogga Dalka,inkastoo Mararka qaar ay Ciidamada kala kulmaan Dagaal culus oo kaga Yimaado Al-Shabaab
Madaxwayne Laftagareen oo la kulmay Mukhtaar Roobow